အလှကုန်မိတ်ကပ်ကိရိယာ DIY မျက်နှာဖုံးအပလီကေးရှင်းဘရပ်ရှ် ပျော့ပျောင်းသောဆီလီကွန်မျက်နှာဖုံးဖြီး
ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ မူရင်းနေရာ- Zhejiang တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OEM မော်ဒယ်နံပါတ်- BRS0101MK အမျိုးအစား- Fasional အလှပြင်ကိရိယာ လိုဂို- သီးသန့်အညွှန်း လက်ခံနိုင်သော ပက်ကေ့ဂျ်- 1pcs/opp အရောင်- ပုံ သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက် အက်ပ်လီကေးရှင်း- အလှအပထိန်းသိမ်းမှု မိတ်ကပ်ကိရိယာများ ထူးခြားချက်- အသားအရေနှင့်လိုက်ဖက်သော လုပ်ဆောင်ချက် : Brush Tools လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်များ 2018 ခုနှစ် အိမ်အရောက်ပို့ခြင်း: ASAP Keyword: ဆီလီကွန်မိတ်ကပ်ဘရပ်ရှ် ကုန်ပစ္စည်းအမည်: DIY Tool Clay Applicator Silicone Professional Mask Brush ဖြင့် Logo...
MURAN 2021 နှစ်ထပ်ဦးခေါင်း eyeliner တောင်ပံတံဆိပ်ခေါင်း ရေစိုခံရေရှည်ခံရည်တံဆိပ်တုံး eyeliner ဘောပင်
MURAN နှစ်ထပ်ဦးခေါင်း eyeliner တောင်ပံတံဆိပ်တုံး ရေစိုခံ တာရှည်ခံ အရည် eyeliner ဘောပင်တံဆိပ်တုံး
SEXY ကြောင်မျက်လုံးများ - ရိုးရှင်းသောတံဆိပ်တုံးဖြင့် စူးရှပြီး အချိုးကျသော eyeliner အတောင်ပံများကို ပြသပါ။
ကြာရှည်ခံတဲ့ မျက်ခွံ – အမြန်ခြောက်သွေ့တဲ့ အပလီကေးရှင်းက နေ့မှညနေအထိ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
မြင့်မားသောအရောင်ခြယ်ခြင်း- မျက်လုံးတစ်လုံးစီအတွက် အသုံးပြုရလွယ်ကူသော တံဆိပ်တုံးဘောပင်များသည် စင်းလုံးချောမရှိသော Matte လိုင်းများကို ဂျက်အနက်ရောင်ဖြင့် ဖန်တီးပါ။
SMUDGE-PROOF & Water-PROOF - အတောင်ပံပါတဲ့ eyeliner က ဘယ်တော့မှ လိုက်မကပ်ပါဘူး။ရေစိုခံပြီး ညစ်ညမ်းမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မွဲခြောက်ခြောက်ဖြစ်ခြင်း မရှိပါဘူး။
အရောင်းရဆုံး Makeup Liquid Eyebrow Pencil Waterproof Long Lasting4Fork Tips Microblading Eyebrow Tattoo Pen
※ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်- 1.သဘာဝမျက်ခုံးမွေးကိုဖန်တီးရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပုံကြမ်း၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘရပ်ရှ်ခေါင်း 2.ကြာရှည်ခံ၊ ရေစိုခံ၊ အရောင်ရလွယ်ကူပြီး 3.100% အသစ်စက်စက် အရည်အသွေးမြင့် 4.သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသောအရွယ်အစား၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။5. ၎င်းကို အမျိုးသမီးတိုင်းနှင့် သူမ၏ တက်ကြွသော ခေတ်မီသော ဘဝအတွက် ဖန်တီးထားသည်။6.4 ပိုမိုရှင်းလင်းသောလိုင်းများနှင့်ကွဲပြားသောအမြစ်များပါသော ဦးခေါင်း ※အားသာချက်- 1 ကြာရှည်ခံခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူခြင်း2အရည်အသွေးမြင့်၊ အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှု၊ Low MOQ သည် သင့်အတွက်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် အမြန်အသေးစိတ် မူရင်းနေရာ- Zhejiang, China အမှတ်တံဆိပ်အမည်: MURAN BEAUTY မော်ဒယ်နံပါတ်: E...
1. အရေးအကြောင်းများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ ဝက်ခြံများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း၊ အမာရွတ်များကို ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ ပြန်လည်နုပျိုစေခြင်း။
8.dermaroller သည် အရေပြားထိန်း ကုသခြင်းမျိုးများအတွက် အလွန်ထိရောက်သည်။
အမည်းစက်များဖြစ်ပေါ်ရသည့် အကြောင်းရင်းကို သင်သိပါသလား။အမည်းစက်ဖွဲ့စည်းရခြင်းအကြောင်းရင်း- သန့်ရှင်းမှုမပြည့်စုံခြင်း၊ ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ horny ထူလာခြင်း၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအားနည်းခြင်း။Cuticle ချွေးပေါက်ပိတ်ဆို့, အမည်းစက်များပေါ်လာ။ချွေးပေါက်များသည် အမဲရောင် သို့မဟုတ် အနီရောင်ရှိသော ဝက်ခြံများ ပေါ်လာပြီး တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဝက်ခြံအချွန်များထွက်တတ်သည်။ကုန်ပစ္စည်းအမည် Mini လျှပ်စစ်မီးသွေး blackhead Remover လေဟာနယ် အားပြန်သွင်းနိုင်သော ကိရိယာ မျက်နှာသန့်ဆေး စက်စုတ်ယူကိရိယာ Model NO MC001 အမှတ်တံဆိပ်အမည်- OEM/ODM ပစ္စည်း- ABS & Plastic Fea...